Gbasara Anyị | Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd.
Ntọala guzosiri ike na Sep.8th, 1993, Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd, ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na-arụ ọrụ na ngwa ụlọ yana onyinye Onyinye. Ruo ugbu a, Lianchuang Group enweworị ụlọ ọrụ enyemaka 13, n'etiti nke Shenzhen Lianchuang Electric Ngwa Mmemme Co., Ltd na-agba mbọ na ntinye ngwa ụlọ nke oge a na-ekpuchi Ikpuchi Ndị na-ekpo ọkụ, Ndị na-ahụ maka ọkụ eletrik, ndị ọkụ eletrik, Humidifiers.
Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd na-ejikọ R&D, imepụta, ahịa na ọrụ, ka ọ dị ugbu a na-agbadoro iji gosipụta onwe ya na ntuziaka nke mkpa ndị ahịa. Ruo ugbu a, Lianchuang emeriwo ihe karịrị 1000 ụdị ikikere gụnyere akwụkwọ nyocha, ikike ichepụta ihe, ikike ị nweta ihe wdg.
N'ọhụụ nke ọdịnihu, Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd ga-ejigide mmụọ nke "Ọkachamara, Ogo na Innovation", na-agbanwe site na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ okike, ma mesịa nyefee na ụlọ ọrụ kachasị emetụta.
Ihe nhicha ikuku na washer (DF-HU29100)
Nlere okirikiri nke na-acha uhie uhie na-enye ihe nrite
Okpomọkụ (ncha ọbara ọbara akara ngosi ngwaahịa)